Promosol, solar oveni "yakagadzirwa mu" Chad - Afrikhepri Fondation
Chitatu, Kukadzi 24, 2021
Promosol, solar oven
Promosol, ovhoni yezuva "yakagadzirwa mu" Chad
Liye Promosol oven inokutendera iwe kubika chikafu chezuva nezuva uchishandisa simba rezuva. Magazini "Réussite" inounza iwe kuChad kunosangana nevashandisi, vagadziri uye vanosimudzira veichi chigadzirwa chinogona kugadzirisa shanduko yekuwana kwevanhu simba.
MuChad, umo chete 5% yevagari inowana magetsi, iyo ovhisi yePromosol inopa mukana wekubika chikafu uchishandisa simba rezuva. Yakatangwa makore matatu apfuura neNGO Promosol, ovhoni iyi inzira yezvakatipoteredza yekuparadza masango uye mhinduro kumitengo inokwira yehuni, inowanzo shandiswa pakubika.
Iwo "Kubudirira" makamera akaenda kunosangana nevaChanadia avo vaiyedza neiyo Promosol oven. Tsvaga, mune uyu mushumo, zvipupuriro zvavo asiwo zveavo vagadziri uye vanosimudzira vechirongwa.
Kunyanya kutaurwa kweiyi ovhoni yezuva: izvo zvinoshandiswa pakugadzira kwayo i100% "yakaitwa mu" Chad uye basa rinodiwa nderemowo. Iyo purojekiti saka yaita kuti zvikwanisike kugadzira gumi nemaviri emabasa munyika uye yakatokunda vanopfuura mazana masere vashandisi.
Iyi nhamba ichiri pazasi pezvido zvePromosol, iyo inoda kukwezva vatengi vatsva. Kuti uite izvi, NGO ine nharo isingarambike: simba rezuva rakasununguka… uye hariperi.
Kufanana kwevakadzi. Kutsvaga kwechimiro
Mabviro eAfrica emurume weVitruvia